चितवनको प्रतिनिधिसभामा पुराना र प्रदेशमा नयाँ अनुहार – Saurahaonline.com
चितवनको प्रतिनिधिसभामा पुराना र प्रदेशमा नयाँ अनुहार
चितवन, २ पुष । चितवनमा प्रतिनिधिसभाका तीन र प्रदेशसभाका छ गरेर कुल नौवटा निर्वाचन क्षेत्रहरु थिए । ती सबै क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु विजयी भए । क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधिसभा र दुवै प्रदेशसभामा एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी भए । क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधिसभा र एउटा प्रदेशसभामा एमाले र एउटा प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भए ।
त्यस्तै क्षेत्र नं. ३ मा प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार र दुई प्रदेशसभामध्ये एउटामा एमाले र एउटामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भए । लैङ्गिक, जातीय तथा अनुभवका हिसाबले कस्ता छन् त चितवनका नव निर्वाचित प्रतिनिधि ? उनीहरुको लेखाजोखा यहाँ गरिएको छ । चितवन पोष्टमा खबर छ।
अनुभवी सांसद, नौला प्रदेश सदस्य
चितवनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका तीनजना अनुभवी नेताहरु हुन् । क्षेत्र नं. १ बाट विजयी एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे राष्ट्रिय सभाका सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी विसं २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनपछि समानुपातिकबाट सभासद् चुनिएका थिए । ७० सालमा भएको दास्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा उनी चितवन क्षेत्र नं. १ बाटै विजयी भए ।
क्षेत्रगत निर्वाचनमा पाण्डेको यो लगातार दोस्रो विजय यात्रा हो । तर, जन प्रतिनिधिमूलक निकायमा उनी चौथो पटक पुग्दैछन् । त्यसैगरी चितवन क्षेत्र नं. २ बाट विजयी भएका एमालेका कृष्णभक्त पोखरलको पनि लगातार दोस्रो जित हो । विसं २०७० सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा उनी चितवनको तत्कालीन क्षेत्र नं. ३ बाट विजयी भएका थिए । जसमा धेरै भूभाग अहिले २ मा पर्छ ।
त्यस्तै चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त ६४ र ७० सालमा विजयी भएर सभासद्÷विधायक र सांसद भएका व्यक्ति मात्रै होइनन् दुवै पटक प्रधानमन्त्री पनि भएका नेता हुन् । त्यसैले चितवनबाट विजयी सबै सांसद अनुभवी छन् । तर, प्रदेशसभामा यस्तो अवस्था छैन । सबै छ जना नयाँ छन् ।
चितवन क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा १ बाट विजयी दावा दोर्जे लामा पहिलो पटक विधायकीय हैसियतमा विजयी भएका छन् । त्यस्तै प्रदेशसभाको २ मा विजयी कृष्ण खनाल पनि राजनीतिमा पुराना भए पनि क्षेत्रगत चुनावमा पहिलो पटक विजयी भएका व्यक्ति हुन् । उनी दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार त थिए तर निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसम्म भएका थिए ।
त्यस्तै चितवन क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा १ मा विजयी माओवादी केन्द्रका घनश्याम दाहाल ‘अविनास’ पनि क्षेत्रगत निर्वाचनमा पहिलो पटक विजयी भएका नेता हुन् । त्यस्तै प्रदेशसभा २ मा विजयी विजय सुवेदीले ५१ सालदेखि सांसद र सभासदको चुनाव लड्दै आए । तर, विजयी भने प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा उठेपछि भएका छन् ।
चितवन क्षेत्र नं. ३ को प्रदेशसभा १ मा विजयी एमालेका कृष्णप्रसाद भुर्तेल र क्षेत्र नं. २ मा विजयी प्रदेशसभा सदस्य रामलाल महतो पनि क्षेत्रगत निर्वाचनमा पहिलो पटक विजयी भएका हुन् । तर, उनीहरुसँग स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएर पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव भने छ । महतो तत्कालीन पटिहानी र भुर्तेल मेघौली गाविसको अध्यक्षमा विजयी भएका थिए ।
आदिवासी र जनजाति प्रदेश सदस्य मात्रै
लिङ्गका हिसाबले यो चुनावमा चितवनमा सबै पुरुष मात्रै विजयी भए । त्यस्तै सांसदमा निर्वाचित सबै तीन जना जातीय हिसाबले व्राम्हण समुदायका छन् । आदिवासी र जनजाति समुदायका व्यक्तिहरु प्रदेशसभामा मात्रै विजयी भए । त्यसमा पनि दुई तिहाइ व्राम्हण समुदायका छन् ।
प्रदेशसभाका छमध्ये चितवन क्षेत्र नं. ३ को प्रदेशसभा २ मा विजयी माओवादी केन्द्रका रामलाल महतो चितवनको आदिवासी समुदाय थारु जातिका हुन् । त्यस्तै क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा १ मा विजयी दावादोर्जे लामा जनजाति समुदायका हुन् ।
चितवनमा पहाडी क्षेत्रमा बस्ने चेपाङ र मैदानी क्षेत्रमा बस्ने थारु, दराई, कुमाल यहाँका आदिवासी समुदाय हुन् । निर्वाचनबाट आदिवासी समुदाय थारु जातिका एकजना मात्रै जनप्रतिनिधि चितवनले पाएको छ ।